Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny mosary manerantany dia olana goavana hoy ny ankamaroan'ny Amerikanina
"Ny ankamaroan'ny Amerikanina dia manaiky fa ny hanoanana eran-tany dia olana lehibe, ary ny krizy amin'ny toetr'andro dia krizy hanoanana. Ankehitriny, tsy maintsy miroso amin'ny hetsika manoloana ny ahiahintsika ireo mpitarika antsika”, hoy ny Dr. Charles Owubah, tale jeneralin'ny Action Against Hunger.
Ho fanamarihana ny Andron'ny Sakafo Maneran-tany tamin'ny 16 Oktobra, ny Action Against Hunger, mpitarika tsy mitady tombontsoa amin'ny hetsika maneran-tany hampitsahatra ny hanoanana, dia namoaka androany ny valin'ny fanadihadiana natao tamin'ireo olon-dehibe amerikana maherin'ny 2,000 notarihin'ny The Harris Poll izay mampiseho fa ny 86%-n'ny Amerikanina. mino fa mbola olana goavana ny hanoanana maneran-tany. Ny 73%-n'ny Amerikanina fanampiny dia milaza fa ny fiovan'ny toetr'andro dia hampitombo ny hanoanana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina mahantra indrindra eran-tany, ary maherin'ny antsasany (56%) amin'ireo namaly no milaza fa firenena manankarena, toa an'i Etazonia, dia tokony hanampy ireo firenena ambany fidiram-bola handoa ny vidin'ny fampifanarahana amin'ny toetr'andro. fiovana.
“Manerana izao tontolo izao, olona 811 tapitrisa no matory amin'ny hanoanana isan'alina — ary any amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao dia mety mahafaty ny hanoanana. Tsy maintsy ataontsika isan'andro ny Andro eran-tany ho an'ny sakafo mandra-pahatongantsika ny iraka hampitsaharana ny hanoanana ho an'ny rehetra, ho amin'ny tsara, ”hoy ny Dr. Owubah.
Ny valim-pikarohana fanampiny dia ahitana:
• Efa ho ny antsasaky ny Amerikanina rehetra no manahy ny amin'ny fiakaran'ny vidin-tsakafo vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Fanampin'izany, ny 46%-n'ny Amerikanina dia nilaza fa anisan'ny ahiahin'izy ireo ny toetr'andro lehibe indrindra ho an'ny taranaka manaraka ny “miaina ao anatin'ny tontolo iray tsy dia misy sakafo firy (izany hoe, tsy fahampian-tsakafo bebe kokoa noho ny fikorontanan'ny toetr'andro)”.
• Ny Boomers no tena mety hilaza fa ny hanoanana maneran-tany dia mbola olana lehibe. Ny fahatsiarovan-tena momba ny hanoanana maneran-tany ho olana lehibe dia manan-danja ara-statistika eo amin'ireo Boomers (57-75 taona) izay mety kokoa noho ny Gen Z (18-24 taona) sy ny Gen X (41-56 taona) hino fa mbola olana goavana ny hanoanana maneran-tany. eto amin'izao tontolo izao ankehitriny (89% vs. 81% sy 83%).
• Mihevitra ny 75% amin'ny Amerikanina fa mampidi-doza ho an'ny hoavin'ny taranak'olombelona ny fiovaovan'ny toetr'andro, ary ny 74% dia mino fa isika rehetra – anisan'izany ny vondrona toy ny governemanta, ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra, ary ny orinasa – dia tokony hanao bebe kokoa hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fanadihadiana mitovy amin'izany avy amin'ny Action Against Hunger UK dia nahita olana mitovy amin'izany teo amin'ny vahoaka tao.
• Ny 60% amin'ny lehilahy, 68% amin'ny Gen Z, ary 76% amin'ny Black Americans dia mino fa ny firenena manankarena kokoa, toa an'i Etazonia, dia tokony hanampy ny firenena ambany fidiram-bola handoavana ny saran'ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Amin'ny lehilahy, 60% no manaiky an'io fomba io, raha ampitahaina amin'ny 53% amin'ny vehivavy. 76% amin'ny Amerikana mainty hoditra tsy Hispanika no manaiky an'io fihetseham-po io, raha ampitahaina amin'ny 50% amin'ny Amerikanina Fotsy tsy Hispanika ary 61% amin'ny Amerikana Hispanika. 68% amin'ny Gen Z sy 65% ​​amin'ny Millennials no manaiky, toy ny 52% amin'ny Gen X sy 47% amin'ny Boomers.
Ny zavatra hitan'ny Action Against Hunger dia tonga taorian'ny Index Global Hunger Index tamin'ny 2021, izay nahita fa ny hanoanana dia mijanona ho “mahery vaika, mampatahotra, na manaitra be any amin'ny firenena efa ho 50” ary ny Firenena Mikambana dia mitatitra fa olona 1 amin'ny 33 eran-tany no mila fanampiana maha-olona.
“Fahatsiarovan-tena raha dingana voalohany manan-danja. Ankehitriny, izao tontolo izao dia mila fomba mahomby sy azo atokisana kokoa hiatrehana ny hanoanana sy ny fiovan'ny toetr'andro noho ny fitomboan'ny fandrahonana ara-pahasalamana ho an'ny daholobe, ”hoy ny Dr. Owubah. "Ny tsy fahombiazan'ny famahana ny hanoanana dia mety hanakorontana lalina ho an'ny fanjakana efa marefo, satria ny hanoanana dia antony sy vokatry ny fifandirana. Rehefa mampiasa vola amin'ny ady amin'ny hanoanana sy famonjena aina izahay, dia mampiasa vola amin'ny ho avy: ny fikarohana dia naneho fa isaky ny $1 laniny amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mitondra vola 16 dolara amin'ny fiaraha-monina.
Ity fanadihadiana ity dia natao an-tserasera tao Etazonia nataon'ny The Harris Poll amin'ny anaran'ny Action Against Hunger teo anelanelan'ny Oktobra12-14, 2021 tamin'ireo olon-dehibe 2,019 amerikana 18 taona+. Ity fanadihadiana an-tserasera ity dia tsy mifototra amin'ny santionan'ny mety ary noho izany dia tsy misy tombantombana momba ny hadisoan'ny santionany teorika azo kajy. Ho an'ny fomba fanadihadiana feno, anisan'izany ny fari-pahaizan'ny lanja sy ny haben'ny santionan'ny zana-bondro, azafady mifandraisa amin'i Shayna Samuels, 718-541-4785 na [email voaaro]
Action Against Hunger dia fikambanana tsy mitady tombontsoa mitarika hetsika manerantany hampitsahatra ny hanoanana mandritra ny androm-piainantsika. Izy io dia manavao vahaolana, miaro ny fanovana ary mahatratra olona 25 tapitrisa isan-taona miaraka amin'ny programa fisorohana sy fitsaboana voaporofo. Amin'ny maha-tsy mitady tombony miasa manerana ny firenena 50, ny mpiasany 8,300 manokan-tena dia miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina mba hamahana ireo fototry ny hanoanana, anisan'izany ny fiovan'ny toetr'andro, ny fifandirana, ny tsy fitoviana ary ny hamehana. Miezaka ny hamorona tontolo tsy misy hanoanana, ho an'ny rehetra, ho amin'ny tsara.